EURO 2016: Xulka Jarmalka oo si raaxo leh ku gaaray siddeed dhammaadka koobka Qaramada Yurub, xilli Ozil rigoore laga qabtay + Sawirro – Gool FM
EURO 2016: Xulka Jarmalka oo si raaxo leh ku gaaray siddeed dhammaadka koobka Qaramada Yurub, xilli Ozil rigoore laga qabtay + Sawirro
(Paris) 26 Juunyo 2016 – Xulka qaranka Germany ayaa si raaxo leh ugu gudbay siddeed dhammaadka koobka qaramada Yurub, kaddib guul 3-0 ay ka gaareen Slovakia, iyadoo Mesut Ozil rigoore laga qabtay qeybta hore.
Jerome Boateng ayaa goolasha u daah rogay xulka Jarmalka, kaddib markii 8’daqiiqo bilowgii ciyaarta uu shabaqa dhigay kubbad xoog leh oo uu ka soo tuuray bannaanka hore ee xerada ganaaxa, markii wiilasha Slovakia ay iska soo saareen kubbad gees laad ahayd ama koorno.
Xulka Jarmalka ayaa helay fursad kale oo uu hoggaanka ciyaarta ku dheereysan karay qeybta hore kaddib gool ku laad loo dhigay, markii Martin Skrtel uu xerada ganaaxa ku jilaafay Mario Gomez, waxaana rigooradaas xulka Jamalka ka khasaariyey oo laga qabtay xiddiga kooxda Arsenal ee Mesut Ozil.
Germany ayaa wali duullaankiisa iska sii watay ilaa dhammaadkii qeybta hore 43’daqiiqo uu goolka labaad u dhaliyey Mario Gomez markii Draxler uu baas qurux badan ku dhexsiiyey xerada ganaaxa, waxaana xusid mudan in goolhaye Manuel Neuer kubbad madax xoog leh oo gool loo filan karay ka badbaadiyey wiilasha Slovakia kulanka ayaana qeybta hore ku soo dhammaaday 2-0 ay ku gacan sarreeyeen xiddigaha xulka Jarmalka.
Qeybtii labaad ee kulankan markii dib la isugu soo laabtay xulka Jarmalka waxaa hoggaanka u adkeeyey oo ciyaarta 3-0 ka dhigay 63’daqiiqo Julian Draxler, markii uu dhaliyey kubbad dhul ma dhacdo ah, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 3-0 lagu dardaray xulka Slovakia.
Xulka qaranka Jarmalka ayaa sidaasi ku gaaray siddeed dhammaadka tartanka Euro 2016, kaddib guushaas raaxada leh oo uu ka gaaray Slovakia oo gabi ahaanba tartanka isaga haray.
"Kroos waxa uu ahaa badalkeyga Paul Scholes".
Chelsea oo Laacib ka dheela MASAR ku badaleeysa mid ka mida fureyaasheeda oo uu Conte rabo in uu dalabyadiisa dhageeysto